विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्व, राजनीतिक जिबन र साहित्य ⋆ Palpalko.com::No.One news portal from nepal.
विश्वका महान व्यक्तिहरूको जीवन भोगाईलाई हेर्यो भने संघर्षमय नै देखिन्छ । विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालको जीवन गाथालाई हेर्दा पनि हामीले संघर्षमय नै पाउँछौं । उहाँको जन्म नै शैल्यक्रियाबाट भएको थियो ।
वि.सं.१९७१सालको भाद्र महिनामा कृष्णप्रसाद कोईरालाकी कान्छी श्रीमती दिव्या कोइरालाबाट विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको (शैल्यकृयाबाट) वनारसमा जन्म भयो । न्वारन्मा पण्डितले उनको नाम चुडामणी राखेका थिए । यो नाममा कालीदासलाई चित्त बुझेन र उनले बोलाउने नाम विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नामाकरण गरे ।
यही नाम संसार भरिनै प्रख्यात भयो । विश्वेश्वरको बाल्यकालको बसाई चन्द्रगञ्जमा भयो तर चन्द्रगञ्जको बसाइ पनि लामो हुन सकेन किन कि कृष्णप्रसाद कोइरालाले ढाक्रेको नाजुक अवस्था देखेर उनमा दया आयो । देशका जनताको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी चन्द्र शम्शेरलाई गराउन ढाक्रेका शरीरका जुम्म्रा भएका कपडाहरू आफुले लिएर राम्रा कपडाहरू ढाक्रेलाई दिएर पठाए भने जुम्रेलुगाहरू चन्द्रशम्शेर कहाँ पार्सल बनाई पठाए ।
चन्द्र शम्शेरले यो पार्सल हेरे पछि उनी माथि कस्तो कार्वाही हुन्थ्यो होला कृष्णप्रसाद संकेत पाएर भारत लागि सकेका थिए । उनको सर्वश्व सरकारले हरण भयो । यस बखत कोइराला परिवार सर्बहारा हुनुप¥यो र विश्वेश्वर पनि ११ बर्षको उमेरमा परिवारको साथमा वनारसतिर लाग्नु प¥यो । बालक कालमा विश्वेश्वरको बसाई स्थिर रहन पाएन । उनी कहिले वनारस हुन्थ्ये भने कहिले कलकत्ता, कहिले वेतीया, आदि ठाउँमा उनको बाल्यजीवन चक्रमय भयो ।
खानपीनको पनि समस्या थियो । कहिले चना खाएर दिनरात व्यतित गर्नु पथ्र्यो । एउटा कष्टमय जीवनको यात्रामा रहेका वी.पी.को अध्यन पनि कष्टकर यात्रामा नै रह्यो । जब मानिसमा पेट भर्ने समस्याले सताउँछ । खानु बाहेक के नै रहन्छ र ? भनिन्छ उनको परिवार यति दयनाीय अवस्थामा गुज्रेको थियो कि उनी बिमारी भएर शरीर भरी घाउ खटिरा आउँदा ती घाऊ खटिरालाई काट्ने बेलामा वेहोस बनाउने दवाई क्लेरोफर्मसम्म किन्ने पैसा थिएन ।
विना दवाइ नै उनको अपरेशन गर्नु पर्यो । अपरेशन सफल भएन पुन उनी कलकत्ता जानु पर्यो । कलकत्तामा अपरेशन सफल भए पछि पुन वी.पी. वनारस फर्के । विश्वेश्वरले अध्ययनको वातावरण त्यति पाउन सकेनन् तर पनि उनी साहसी थिए । वनारसमा बस्दा दरिदको भारी बोक्न पर्यो र उनका बाबुले टेढीमा जग्गा किने पछि वी.पी. पनि टेढीमा आउनु पर्यो । आधा किशोर अवस्था वी.पी.को टेढीमा नै वित्यो । वी.पी. वलनारसमा पढ्न चहान्थै तर कृष्णप्रसाद कोइरालाले खर्च पुर्याउन नसक्ने अवस्था थियो ।
कोइराला परिवारको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा सुरुमा सम्पन्नशाली नै थिए जव उनको र चान्द्रशमशेरको बीचमा भएको कटुताले गर्दा उनी विदेशीन पर्यो त्यस अवस्थाबाट जवसम्म चन्द्रशमशेर जीवित रहे तवसम्म कोइराला परिवारको आर्थिक जीवन कष्टमय नै रह्यो । वेतियामा बस्दा सबैले पीठो धोलेर खोले खाएर पनि वाँच्न वाध्य थिए । भनिन्छ हरिहरको मृत्यु हुँदा कात्रो किन्ने पैसा समेत थिएन ।
पेट पाल्नको लागि पत्रिका बेच्नु पथ्र्यो । जव चन्द्र शम्शेरको मृत्यु भयो र भीम शम्शेर मन्त्री भए तब कहृष्णप्रसाद नेपाल फर्के । पुन उनी व्यपारमा लागे र आर्थिक अवस्था सुध्रदै गयो । जस्तो जस्तो विषम परिस्थिति परिवारले व्यहोर्नु प¥यो, त्यस्तै त्यस्तै अवस्थाको प्रभाव वी.पी.मा पर्नु स्वभाविक थियो । उनी बालक कालबाटै साहसी, मातापिताप्रति आदरभाव राख्ने आज्ञाकारी बालक थिए ।
वी.पी.को अध्यनको थालनी बनारसबाट भएको थियो । टेढीमा आए पछि टेढी (हाजिको वाग)मा जग्गा किनेर कृष्णप्रसादले स्कूल र छात्रास बनाए । विश्वेश्वरको अध्यन यहींबाट राम्रोसँग थालनी भयो । वी.पी. टेढीबाट बनारस जान चाहान्थे । उनलाई बाटोखर्च दिन नसक्ने अवस्थाले गर्दा यो समस्या हल गर्नको लागि सानीआमा सँग भएको मुन्द्री र बहिनी नलिनीले पनि मुद्रि दिए पछि वी.पी.ले चिउरा र गुणलाइ पोको पारेर बाटोमा खानको लागि लिएर वनारसतिर लागे । यो सुन बेचेर प्राप्त रकमले स्कुलमा भर्ना भए ।
वी.पी.ले मेट्रिक पास दोस्रो श्रेणिमा गरे । मेट्रिक पास गरेपछि कलकत्ताबाट अध्ययन गरोस् भन्ने कृष्णप्रसादको चाहाना थियो तर वी.पी कलकत्ता भन्दा वनारस नै राम्रो मान्दथे र उनले वनारसै पढ्न थाले । १२ पास पनि वी.पी.ले वनारसबाटै गरे ।सन् १९३४मा वी.पी.राजनीति शास्त्रमा स्नातक भए । यिनले कानूनमा स्नातकोपाधि पनि पाएका थिए ।
वी.पीको विवाह पनि साधारण रूपमा भएको थियो । उनले झापाका बडाहाकिम कमलप्रादकी छोरी शुशीलासँग, विवाह गरेका थिए । विवाह गर्दा पनि वी.पी.को आर्थिक अवस्था निकै कमजोड थियो । उनका साथी देवेन्द्रसँग ्चारपाँचसय रुपियाँ लिएर विवाह सुसम्पन्न गरे । वी.पी.को विवाहमा आमा बाबु दुवैको उपस्थिति थिएन । दाम्पत्व जीवन पनि सुखमय रह्यो । उनीबाट तीन छोरा र दुई छोरी जन्मे । छोरहरूमा प्रकाश, श्रीहर्ष र शशाङ्क हुन् भने छोरी एकको मृत्यु भएको र एक छोरी जीवित रहिन् ।
वी.पी.को राजनीतिक जीवन
वी.पी.को राजनीतिको थालनी पनि रहस्यमय छ । उनी सर्बप्रथम आतङ्कवादमा देखिए । उनलाई वेतियामा भएको हत्या हिंसा र डकैतीको केशमा चारमहिना (१९३०) थुनामा बस्नु प¥यो । मोतीहारीको डकैतीको केशमा पनि नाम मुच्छिएको थियो तर त्यसमा यिनको सहभागिता थिएन र सफाइ पाए । यिनको राजनीति प्रभाव सर्बप्रथम माक्र्सवादमा परेको थियो । उनी बम्बै पनि गएका थिए र उनले माक्र्सवादका कृतिहरूको अध्ययन पनि गरेका थिए ।
कृष्णप्रसाद काँग्रेसी संस्थामा आवद्ध थिए । राजनीतिमा पनि कृष्णप्रसादको छाप वी.पी.मा परेको थियो । पटनामा बस्दा यिनले नरेन्द्र, लोहिया र जेपीजस्ता भारतीय नेताहरूको सम्पर्क भयो । पछि यिनीहरूसँको सम्पर्कले गर्दा वी.पी. पार्टीमा पनि आवद्ध भएका थिए । भारतमा जब अंग्रेजलाई भारत छोड भन्ने आन्दोलन भयो । त्यस समयमा वी.पी. धेरै पटक जेल पनि गए ।
अंग्रेजले भारत छाड्नै पर्यो । भारत स्वतन्त्र भयो । भारतीय आन्दोलनको प्रभाव क्षिमेकी देशमा पनि परेको थियो । नेपालमा पनि राणाले गरेको अत्यचारबाट नेपाली जनता मुक्त हुन चाहान्थे । जन चाहनालाई बुझ्दा साहित्यकार तथा लेखकको यस्ता बेलामा चुपलागेर बस्ने अवस्था थिएन । धरणी धरले ‘नैवेद्य’ लेखे, कृष्णलाल अधिकारीको ‘मकै खेती’,जस्ता कृतिको जन्म पनि भयो ।
कृष्णलाल अधिकारीले ‘मकै खेती’लेखेकोमा सरकारले जेल चलान गर्यो र उनको जेलमै मृत्यु भयो । यी मात्र नभएर यी भन्दा पनि पहिला राणा धपाऊ भन्ने अभियान नभएको हैन तर यिनलाई राणाहरूले निर्मम तरिकाले दवाएका थिए । १९९३ साल जेठ २२ गते नेपाली जनताले मुक्तिको लागि प्रजापरिषद नामक संस्था खोले । यस माथि पनि राणाहरूको कडा निगरानी थियो ।
यो मर्म वी.पी.लाई थाहा थियो । उनले संगठनको महसूस गरेर पटनाबाट निस्कने पत्रिका ‘सर्चलाइट’ नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि इच्छुक व्याक्ति मेरो सम्पर्कमा आउनु भनि समचार छपाउने काम गरे । यो समचारले इच्छुक नेपालीहरू वी.पी.को नजिक आउन थाले । वनारसमा तदर्थ समिति खोल्ने तय भयो । सुब्बा देवीप्रसादको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष बालचन्द्र शर्मा र वी.पी. संयोजक रहने गरी तदर्थ समिति गठन गरियो ।
भारतमा, नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि एउटा संस्थाको, जन्म भयो । यो तदर्थ समितिले भारतका कुना काप्चामा रहेका नेपालीहरूलाई यो संंदेश दिदै भेटने काम पनि भयो । यसै समयमा गणेशमानजीको र वी.पी.को भेटवार्ताहरू पनि भए । यो तदर्थ समितिले कलकत्ताको भवानीपुरमा बृहत सभाको आयोजना गरेर सञ्चालक समितिको चयन गर्ने काम भयो ।
१३ सदस्य रहेको समितिको सभापति ट्रकप्रसाद आचार्यले सम्हालेका थिए । राष्ट्रिय क्राँगे्रस भनेर पार्टीको नामाकरण गरियो । नेपालमा मज्दुर आन्दोलन पनि भयो । यस आन्दोलनमा पनि वी.पी. गिरफ्तार हुनु भयो । एकातिर देशको आन्दोलनलाई अगाडी बढाउनु थियो भने अर्कोतिर पार्टीमा पनि तनाव थियो । पार्टी पनि विभाजित भयो । वी.पीले. एक पार्टीको नेतृत्व लिनु भयो भने अर्को पार्टीको नेतृत्व डिल्लीरमण रेग्मीले । देशमा प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा रहेका राणाहरूमा पनि पदृम शम्शेरले मन्त्रीपद त्यागे र मोहन शम्शेर प्रधान मन्त्री भए । एक त राणाहरू ए, वी, सी, बर्गमा विभाजित थिए ।
सुवर्ण शम्शेरलाई जुद्धशम्शेरले निकालेका थिए । सुवर्ण शम्शेरले नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको संस्थापकको रूपमा नेतृत्व लिए । मोहन शम्शेरले पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाए । वी. पी. पार्टी सुधिरीकरणको लागि भूमिगत रूपमा नेपाल आएका थिए तर पक्रिए र जेलमा राखिए । यहाँ पनि वी.पी.ले अनसनमा बस्नुप¥यो । रिहाइ भए पछि ,देशमा प्रजातन्त्र बहाली गर्न संघर्ष विना सम्भव नहुने देखेर वी.पी.ले संघर्षको लागि आवाहन गरे । वि.सं. २००७ सालमा दिल्लीमा सम्झौता भयो र प्रजातान्त्रिक सरकारको गठन भइ मोहन शम्शेरको प्रधान मन्त्रीत्वमा वी.पी. गृह्य मन्त्री बन्नु भयो । यो मन्त्रीमण्डल त्यति टिकाउ हुन सकेन । २००८ सालमा मातृकाप्रसाद प्रधान मन्त्री भए । मातृका र वी.पी.मा मनोमालिन्यता बढ्न थाल्यो ।
मातृका दरवारतिर ढल्किए र अलग्गै पार्टी खोले नेकाकौ छैटौं महाधिवेशनमा वी.पी.ले चाहेको समाजवादी अर्थनीति लागु भयो । वि.सं. २०११ चैत्र १ गते राजा त्रिभूवनको स्वर्गारोहण भयो । महेन्द्र राजा बने पछि संविधान सभा नगराउने छाँट देखियो । वी.पीले संविधान सभाको चुनाउ चाँहाँदा चाँहादै पनि राजाले प्रधान मन्त्री परिवर्तन गर्दै संसदीय चुनावको घोषण गरे । वी.पीले परिस्थितिलाई अध्ययन गर्दै चुनावलाई स्वीकारे । चुनाव भयो । नेकाले बहुमत ल्यायो र वी.पी. प्रंधानमँत्री भए ।
नेकाको सरकारलाई पतन गरउनको लागि ठूलो षडयन्त्र भइरहेको थियो । २०१७साल पौष १गते तरुणदलको उद्घाटन भाषण गर्दा गर्दै वी.पी लगायतका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो । पार्टीहरूमा प्रतिबन्ध लगाइयो । अन्तराष्ट्रको दवावलाई पनि महेन्द्रले सुनेन् । राजबन्दीलाई पत्रपत्रिका पढ्न पाउने छुट हुनुपनर्,े राजबन्दी सँगै बस्न पाउने, खेल खेल्ने व्यवस्था, भेट्न आउनेले भेट गर्न पाउने पर्ने सुविधा, न्याय पाउनको लागि अदालत जान पाउने सुविधा केही नभएकोले वी.पीले यी सुविधाको लागि अनसन बसे ।
न्यायलयमा जान पाउने सुविधा भने सरकारले दिएन तर अरु माग राज्यले प्रदान ग¥यो । यसरी सुन्दरी जल जेलमा आठ बर्ष बस्दा वी.पी. विमारी पर्नु भयो । उपचारको लागि वि.सं २०२५ साल कार्तिक महिनामा रिहा हुनु भयो । भारतमा उपचार गराएर पुन वी.पी नेपाल आउनु भयो तर भारतमा उपचारले मात्र नहुने भए पछि वी.पी.ले युरोप जाने राहदानी माग गर्नु भयो तर त्यो नेपाल सरकारले दिएन र भारतैबाट राहदानी मिलाएर युरोपमा गएर उपचार गराएर फर्कनु भयो ।
देशमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली गर्न सशस्त्र क्रान्तिको महसूस गरेर वी.पी.को नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति भयो तर क्रान्ति सफल हुन सकेन । वी.पी. भारतमा रहन पनि, इन्दिरा गान्धीको विस्तारवादी नीतिले गर्दा, कठीन भयो । देश नै नरहने हो कि भन्ने आशंकाले गर्दा वी. पी.ले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ साल पौष १६ गते नेपाल फर्कनु भयो । नेपाल फर्कने क्रममा वी.पी.लाई देशद्रोह र राजद्रोहका मुद्दा चलाइयो । पञ्चहरू कुर्ले, फाँसीको सजाएको माग गरियो ।
तर २०३४सालम राजा वीरेन्द्रले उपचारको लागि अमेरिका जाने र सरकारी खर्चमा उपचार गराउने भन्दै रिहा गरियो । वी.पी.ले उपचार गराएर भारत हुँदै नेपाल फर्कनु भयो । जेलमा रहँदा होस् तथा बाहिर जाँदा होस् वी.पी.को चिन्तन देशमा प्रजात र समाजवादको स्थापनाको लागि संघर्षरत रह्यो । सिडनीमा भएको समाजवादको सम्मेलनमा पनि वी.पी. सहभागी हुनुभयो र समाजवादकै लागि ओकालत गर्नु भयो । २०३६सालमा राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदल रोज्ने भनेर जनमत सङ्ग्रहको घोषण गरियो । जनमतसङ्ग्रहमा पनि नेपाली जनताको चाहना पुरा हुन पाएन ।
बाजी पञ्चहरुले नै मारे । २०३८ वैशाखमा सुधारिएको संविधान अनुसार चुनाव हुने भयो । एवम् रीतले वी.पीको सारा जीवन संघर्षरत नै रह्यो । देश काल परिस्थिति बुझेर देशलाई प्रजातन्त्र र समाजवादमा लाने वी.पी.को जुन अठोठता थियो त्यो भने उनको जीवनकालमा पुरा हुन सकेन तर भाइ गिरिजा प्रसाद कोइरालको नेतृत्वमा नेपालमा गणतन्त्र नै वहाली भयो । यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने काम अव ……………………………… ।
वी.पी.को साहित्यिक यात्रा
वी.पीको जीवनलाई नियाल्ने हो भने राजनीति योगदानमात्र हेरेर पुग्दैन । उनको साहित्यिक योगदानको पनि अध्ययन हुनुपर्दछ । उनको, उनलाई नेपाली साहित्यि लेखन भन्दा पहिला उनमा अंग्रेजी र हिन्दी कथा उपन्यासको अध्ययनमा रुचि थियो ।
उनी हिन्दी साहित्यका साहित्यकारहरू शान्तिप्रिय द्विवेदी, रामकृष्ण दास, जयशङकर, मैथिलीशरण गुप्ता, सुमित्रानन्दन पन्त, मुन्सी प्रेमचन्द्रसँग साहित्य लेखन र अध्ययनको सिलसिलामा उनको सम्बन्ध बढ्दै गएको थियो ।
यिनले कृतिहरूको अध्ययन गर्ने मात्र हैन यसलाई व्यवहारमा उतार्ने वानी भएकोले, उनलाई हामीले कहिले फ्रायडवादीको रूपमा, कहिले छायावादी, कहिले यौनवादी, कहिले मनोविज्ञानवादी कहिले आदर्श वादी, कहिले रहस्यवादी, कहिले अध्यात्मवादी, कहिले नियतीवादी, आदि विविध वादीको रूपमा पाउँछौं ।
उनको लेखनको थालनी पनि हिन्दी भाषाबाट भयो । लेखनको थालनी १६ बर्षको कलिलो उमेरमै भएको थियो । ‘चन्द्रवदन’ नेपालीको उनको पहिलो कथा हो । ‘कथा कुसुमा’, ‘श्वेत भैरुवी ’ ‘दोषी चश्मा’ वी.पीका कथा कृतिको रूपमा अध्ययन गर्न पाइन्छ भने फुटकर कथाहरू पनि विभिन्न पत्रिकामा पढ्न पाइन्छन् ।
‘तीन घुम्ती’, ‘नरेन्द्र दाइ’, सुम्निमा, ‘मोदिआइन्’, ‘हिटलर र यहुदी’ र ‘बाबु आमा र छोरा’ वी.पीका उपन्यासहरू हुन् यी उपन्यास बाहेक वी.पी.ले आफ्नो कथा, जेलजर्नल, आत्मवृतान्त आदिका अमूल्य कृतिहरू हामीलाई छाडेर जानु भएको छ । उहाँ कवि, निबन्धकार कथाकार, उपन्यासकारमात्र नभै उहाँ एक दार्शनिक पनि हो ।
साभार – समकालीन साहित्य – सदानन्द अभागी